Madaxweyne Farmaajo oo war kasoo saaray weerarkii Hotel Elite sheegayna ‘ujeed laga leeyahay. | Dhamays Media Group
Madaxweyne Farmaajo oo war kasoo saaray weerarkii Hotel Elite sheegayna ‘ujeed laga leeyahay.
Muqdisho (Dhamays) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray si weyn ugu cambaareeyey weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ka fulisay hotelka Elite ee magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyey ku dhawaaad 17 qof ayaa ku geeriyoodeen weerarka, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 30 qof oo kale.
Madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka tacsiyeeyey geerida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee argagixisadu ay sida gaadmada ah ugu laayeen mid ka mid ah hoteellada ku yaala Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay murugada uu leeyahay falkan arxan darrada ah maadaama cadowgu ay doonayaan in ay ku dhibaateeyaan kobaca amniga, dhaqaalaha iyo xasiiloonida Caasimadda oo dadaal badan la geliyey.
“Ujeedka ugu weyn ee argagixisadu ay u qaadayaan weeraradan gaadmada ah waa in ay niyad jabiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ka soo kabanaya duruufaha adag. Waa xaqiiq in qorshahoodu uu yahay mid lagu dhibaateynayo qof kasta oo Soomaaliyeed iyadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee la marin habaabiyey.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa Alle u weydiiyey caafimaad deg-deg ah dhammaan muwaadiniinta ku dhaawacmay weerarkan argagixisanimo, isagoo ugu baaqay shacabka in ay garab istaagaan walaalahooda ay argagixisadu dhibaateeyeen.
Previous: Qaraxyo Xooggan oo khasaare dhimasho iyo dhaawac-ba sababay, Oo ka dhacay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Next: Madaxweynaha Taiwan Oo Ka Farxisay Somaliland, Shiinahana ka Nixisay Iyo Sababta
Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo ku Dhawaaqay Xilliga Degmo-doorasho Beddelka iyo Kaadh Bixinta
Dowladda Soomaaliya Oo Sheegtay Inaanay Aqbalayn Dib u Dhigista Dacwada Badda ee u dhexeysa Keenya
Komishanka Doorashooyinka oo war ka soo saaray Qorsheyaasha Diyaar-garowga Qabsoomidda Doorashada
Hargaysa : Eng Wiiwaa Oo Shaaciyey Hankiisa Musharaxnimo Iyo Taageero Miisaanleh Oo Loo Muujiyey
Hargeysa: Faahfaahinta Kulan Dhexmaray Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Safiirka Denmark
MAAMULK WAJAALE OO DAMACSAN INAY SI HOOSE UFASAXAAN ARIN AY SIDA FIINTA UGA QAYLIYEEN GAADIIDLEYDA IYO MURUQ-MAALKA MAGAALADU
Daawo: Musharax Cali Cisman Xusen Guray Oo Cududiisa Taageero Ku Soo Bandhigay Berbera